မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး မတည်ငြိမ်မှုများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြင့်တက်မည့် အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ သတိပေး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar/Burma’s politics can be summed up as ‘neo-Feudal gangsterism’
My Sovereignty Malaysia, My Native Land »
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့ကို လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုများ ရှိနေကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch အဖွဲ့က စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့မှုများကို မြန်မာဘက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆိုထားခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်နှင့်အောက်တိုဘာက မြန်မာအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တို့အကြား လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြန်မာအာဏာပိုင်များသည် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မွတ်စလင်တို့ကို နှစ်ဖက်စလုံး အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ယင်းလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က အသိအမှတ်ပြု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါပေမဲ့ မွတ်စလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထက် ပိုမိုကြာရှည်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကာလ ချမှတ်ခံရပြီး ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မွတ်စလင်တွေလည်း ပိုများလာနေပါတယ်” ဟု Physicians for Human Rights အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ၀ီလျံဒေးဗစ်က ဘန်ကောက်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
“အကြမ်းဖက်မှုက ရပ်တန့်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုက ရှိနေဆဲပါ” ဟု ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်သည့် အလေ့အထနှင့် တရားရေးစနစ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ လူနည်းစုများကို ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် ဥပဒေနှင့် ကျင့်ထုံးများကို သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းပြီး ၎င်းကဆိုသည်။
Tags: Abdul Rashid Dostum, Burma, Human Rights and Liberties, Human Rights Watch, Myanmar, Physicians for Human Rights, Rakhine State, White House
This entry was posted on August 21, 2013 at 3:19 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.